संसदमा पनि महिला हिंसा हुन्छ : सांसद चन्दा चौधरी - Current Nepal News
संसदमा पनि महिला हिंसा हुन्छ : सांसद चन्दा चौधरी
#महिलादिवस | 78 Views | Published Date : 8th March 2019 |
फागुन २४,काठमाडौँ। अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिलादिवसको अवसरमामहिला नेतृहरुले महिलाअधिकार स्थापनाकालागि आन्दोलन अझै आवश्यकता रहेको बताएका छन्। दिवसको अवसरमा रिपोर्टर्स क्लब नेपालले गरेको विशेष साक्षात्कार कार्यक्रममाविभिन्नदलनका नेतृ तथामहिलाअधिकारकर्मीहरुले नेपालमाअझै पनिमहिला पुरुषबीचको समानता स्थापितहुननसकेकाले संघर्ष जारी राख्नुपर्ने बताएका हुन्। साक्षात्कारमा नेपालमहिला संघकी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य उमा रेग्मीले चुल्होदेखि शाषनसम्ममहिलाको सहभागितापुरुष सरह बनाउका लागि संघर्षको आवश्यकता रहेको बताइन्।
विगतमा भएको महिला आन्दोलनले राज्यका विभिन्न निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै रेग्मीले यसलाई सकारात्मक रुपमालिनुपर्ने बताइन्। तर अहिले महिलाले पाएका अधिकार र आरक्षण कसैले माया गरेर दिएको नभै आफूहरुको संघर्षले प्राप्त भएको रेग्मीले दावी गरिन्। आगामी दिनमा महिलामाथि हुने हिंसा र विभेद अन्त्यकालागि सबै महिला अधिकारकर्मी एकतावद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।“शाषक र शाषितहोइन। मालिक र दास होइन। श्रीमानले भातपकाउन र तरकारी काट्न किनहुँदैन?” रेग्मीले प्रश्न गरिन् । रेग्मीले अमेरिकामा समेत महिला प्रतिको दृश्टीकोण परिवर्तन भइनसकेकाले नेपालमा अहिलेको अवस्थालाई अत्यन्तदयनीयभन्ननमिल्ने बताइन्। ‘अमेरिका जस्तो देशमा पनि महिला उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई राष्ट्रपति चुनावमा हराइयो। ‘ उनले भनिन्। रेग्मीले विभिन्ननिकायको नेतृत्व महिलालाई दिने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार समेत कम हुने दावी गरिन्। सबै क्षेत्रको नेतृत्व तहमा रहेका पुरुषहरुले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको जिकिर गर्दै रेग्मीले महिला प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने भ्रष्टाचार रोकिने दावी गरिन्। पछिल्लो समय महिला आन्दोलन सुस्ताएको भन्दै उनले सबै दलका महिला नेतृ र अधिकारकर्मीलाई एक हुनआग्रह समेत गरेकी छिन्।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टीकी महामन्त्री तथा सांसद चन्दा चौधरीले पछिल्ला केही वर्षमा महिला आन्दोलनको उपलब्धि देखिए पनि पर्याप्तन भएको तर्क गरिन्। आरक्षण र ३३ प्रतिशतको बाध्यकारी नियमले मात्रै महिलाको सहभागिता बढेको उल्लेख गर्दै चौधरीले स्थानीय निकायमा प्रमुख जति सबै पुरुष उपप्रमुख जति महिलालाई दिइएको गुनासो गरिन्। चौधरीले पनि निर्मलाका बलात्कारीलाई सरकारले नै लुकाएको आरोप लगाइन्। “निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागि सेकेको छ। तर सरकारले लुकाएको छ। गरिब र निमुखालाई मात्रै नियम लाग्ने हो ?” चौधरीले भनिन्। बलात्कारीलाई फास्ट ट्रयाकबाट कारबाहीगर्ने व्यवस्थासहितको कानुन बनाउनु पर्नेमा चौधरीको जोड छ। चौधरीले समाजमा मात्रै नभै संसदमा पनि महिला हिंसा हुने गरेको उनले बताइन्। बजेट वितरणमा महिला सांसदलाई विभेद गरिएको उनको गुनासो थियो। चुनावकै बेला समानुपातिकतर्फ राख्ने अनि बजेट दिने बेलामा प्रत्यक्षतर्फका सांसदलाई धेरै दिने गरिएको उनको आरोप थियो ।
“संसदमामहिलालाई शोपिस बनाइयो। अब हामीलाई समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्दैन। प्रत्यक्षमा चुनाव लड्न तयार छौँ ।” उनले भनिन्। उनले मिडियाले पनि महिलाको आवाजलाई कम महत्व दिएको आरोप लगाइन्। “हामीले बोलेका कुरा किन महत्वपूर्ण मानिदैन? पुरुष नेताले बोलेका कुरा मात्रै हाइलाइट गरिन्छ।” उनले गुनासो गरिन् । चौधरीले नेपालमा भएका भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा पुरुषहरु नै संलग्न रहेको आरोप लगाइन्। जुन निकायमा पनि पुरुष नै प्रमुख भएकाले भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गर्दै उनले महिलाको भूमिका प्रभावकारी भएको ठाउँमा भ्रष्टाचार नभएको दावी गरिन्। आफूहरु प्रधानमन्त्री बनेर देश संचालन गर्न समेत योग्य भएको उनले बताईन्।
कार्यक्रममा नेकपाकी सांसद शान्ता चौधरीले अधिकार प्राप्तीकाहिसाबले पछिल्लो समयको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन्। महिला संघर्षको उपलब्धि स्वरुप प्राप्त उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै थप अधिकारका लागि अघि बढ्नु पर्नेमा उनले जोड दिइन्। निर्मला पन्तको बलात्कारीलाई सरकारले लुकायो भन्ने आरोप प्रति चौधरीले गम्भीर आपत्तीजनाइन्। पछिल्लो समय निर्मला प्रकरण नै सरकारको प्रमुख मुद्धा भएको दावी गर्दै उनले यो सरकारले बलात्कारी लुकायो भन्नेहरु दुईतिहाई सरकारदेखि डराउनेहरु मात्रै भएको तर्क गरिन्। निर्मला प्रकरणबारे संसदमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले पटक पटक जवाफ दिइसकेको र प्रहरी प्रशासनले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको चौधरीले बताइन् ।“यो देशमा निर्मलाको मात्रै बलात्कार भएको छ र ? निर्मला जस्ता धेरैले हिंसा बेहोर्नु परेको छ। अरुको विषयमा नबोल्ने? किन निर्मलाको विषयामा मात्रै बोल्ने ?” उनले प्रश्नगरिन् ।
कार्यक्रममा महिलाअधिकारकर्मी तथा नयाँशक्ति पार्टीकी सह संयोजक दुर्गा सोवले नेपालमाअझै पनि पुरुष र महिला समान हुन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिन्। उनले पछिल्लो एक दशकमा राजनीतिक रुपमा महिलाले फड्को मारे पनि पर्याप्त नभएको बताएकी हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छाउपडी र मधेशमादाइजो जस्ता कुप्रथाको अन्त्य हुन नसक्दा महिला हिंसा कायमै रहेको उनको भनाई थियो। नेपालमा महिला अधिकारकर्मीहरु आफू आवद्ध दलको आवश्यकतामा मात्रै आन्दोलन र संघर्षमा उत्रिने गरेको सोवको आरोप छ। स्वार्थ केन्द्रितआन्दोलनका कारण महिलाको हकअधिकार अझै पनि सुनिश्चित हुननसकेको उनको तर्क थियो । उनले निर्मला पन्तको बलात्कारी अझै पनि पत्ता लाग्नन सकेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी छिन् । उनले हत्यारा पत्ता लागि सके पनि सरकारले सार्वजनिक गर्न नचाहेको हो किआशंकासमेत व्यक्त गरिन् ।